Toliara: sokatra miisa 70 tratra tao biraon’ny kaoperativa mpitatitra | NewsMada
Toliara: sokatra miisa 70 tratra tao biraon’ny kaoperativa mpitatitra
Na teo aza ny famaizana mafy ireo tratra nangalatra sokatra miisa 10 000, mitohy hatrany ny trafika any Toliara, Atsimo Andrefana. Mila hamafisina ny famongorana sy ny fanapotehana ity tambajotra matanjaka ity.
Tsy misy fitsaharany! Mitohy hatrany ny fangalarana, ny fivarotana, ny fitondrana an-tsokosoko sokatra eto amintsika. Araka ny tatitry ny Fitantanam-paritry ny tontolo iainana sy ny ala (Dreef) Atsimo Andrefana, tratra tao amin’ny biraon’ny kaoperativa fitaterana nasionaly, ny Mafio, ny sokatra miisa 70, ny talata 27 novambra teo. Natao tao anaty harona izy ireo, saika halefa aty Antananarivo, saingy tsy fantatra ny olona nandefa azy sy ny handefasana azy. Misy anarana na soratra somary sarotra vakina kosa eo ivelan’ilay harona, hoe “Mama Coupald”. Nohadihadiana any amin’ny biraon’ny polisy any Toliara ny mpamilin’ilay fiara mpitatitra saika hitondra azy.
Karazana sokabato, pyxis arachnoides ireto tratra ireto, ka lahy ny 17 ary 53 ny vavy. Naterina any amin’ny toerana manokana fikajiana ny sokatra “Village des tortues” any Mangily izy ireo.
Sokatra hafa maherin’ny 7 000
Azo adika fa tsy mataho-maso mena mihitsy ireo mpanao trafika sokatra, indrindra ny any Toliara sy ny faritra Atsimo Andrefana, raha raisina amin’izao tranga izao. Vao ny tapaky ny volana novambra teo, saron’ny tompon’andraikitry ny Dreef Toliara Atsimo Andrefana tany amin’ny tanàna iray antsoina hoe Tongobory ny sokatra miisa 7 347. Niaiky ireo olona tratra fa efa notazonina tao amin’io tanàna io nandritra ny efa-bolana ireo sokatra ireo, nangonina tany amin’ny faritra Androy, teo anelanelan’i Toliara sy i Taolagnaro.
Raha ny loharanom-baovao avy any amin’ny fikambanana WWF, tambajotra matanjaka sy tsara rindra ireo mpanao trafika sokatra. Antony, nahitana vata vita amin’ny hazo tsara rafitra miisa ampolony tany an-toerana. Tsikaritra fa efa nitondrana sokatra ny sasany amin’izy ireo ary misy tarehimarika sy soratra famantarana. Hita ihany koa fa efa nitondrana matetika sokatra ireo vata ireo.
Tsy mikely soroka ny tompon’andraikitra
Nanomboka ny avrily 2018 teo, manodidina ny 19 000 ny sokatra tratra tany Atsimo Andrefana. Tsy mikely soroka ny mpisehatra isan-tsokajiny miady amin’ity tambajotra mpanao trafika ity, ahitana ny fitantanam-paritry ny Tontolo iainana sy ny ala, ny mpitandro filaminana, ny fiarahamonim-pirenena, Bianco, ny fitsarana, ny tompon’andraikitry ny harena an-kibon’ny tany, ny MNP, ny WWF, sns. Natao tany Toliara, ny 23 novambra teo, ny atrikasa lehibe, nikarohana paikady mahomby hiadiana amin’ny trafika sokatra.
Tsiahivina fa nosazin’ny fitsarana, ny 25 oktobra teo, higadra enin-taona an-tranomaizina ireo mpanao trafika sokatra niisa 10 000, niampy lamandy 100 tapitrisa Ar. Saingy, tsy mbola foana ny tambajotra sy ny tena atidoha, hatrany amin’ny vahiny mpanafatra azy any ivelany.